UTM Isku-dubarid bogga adoo isticmaalaya "CivilCAD" - Gofumed
Disember, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Cartografia
Dhawaan ayaan ka hadlayaa CivilCAD, codsi ka shaqeeya AutoCAD iyo sidoo kale on Bricscad; waqtigan waxaan rabaa inaan ku tuso sida loo abuuro miiska isku-duwidda, kaliya sidaanu u aragno waxa lagu sameeyey Microstation Geographics (Hadda Bentley Map). Badanaa waxyaabahaas Barnaamijyada GIS waxay leeyihiin oo leh wax badan oo la taaban karo, laakiin heerka qiyaasta CAD waa wali waa awood, sababtoo ah inkasta oo la abuuray waa in lagu sameeyaa qaab ficil ah, luminta dhaqdhaqaaqa oo u baahan qaar ka mid ah edaabta edbinta.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo ah ikhtiyaarrada Macaawinada Dadweynaha: Iskuduwaha UTM iyo Juqraafi.
1. Hagaajinta faylka CAD.
Sida aan heysano horay u sharraxay, xaqiiqda ah in cabbirku ku jiro UTM isuduwid ma aha macnaheedu in ay tahay jahwareer, sababtoo ah iskudhacyo isku mid ah ayaa lagu soo celiyaa meelo kale, sidaas darteed waa in aad qeexdo meesha aad shaqeyneyso.
Tan waxaa lagu sameeyaa: CivilCAD> Isbedelka doorsoomayaasha.
Si la mid ah, si loo kobciyo isku-duwidda juquraafi, waa inaanu qeexnaa sifooyinka halyeeyada, haddii ay ka duwan yihiin mid ka mid ah GRS80 / WGS84 horay u qaabeeyey:
Dhexdhexaad dherer ah
Wareegga wareegga (darajooyinka), guud ahaan 6
Tani been ah, badanaa 500,000
Isku dhufashada isku dhufashada
Qeybta miisaanka qiyaasta
Dhimashada middiyaha dhexe, tani waa halbowlaha oo ku yaal bartamaha aagga
Waqooyiga been ah.
2. UTM Isku-xirka Shabakadda
Tani, waxaa laga soo xulay menu-ka CivilCAD, cirbadeynta iyo ka dibna UTM; ama amar ahaan gacantaada - RETUTM, ka dibna geli.
Khadka taleefanka farriinta si uu u doorto sanduuqa dantayada ayaa u muuqda, ka dibna laba geesood ee aagga loo calaamadeeyay ayaa la doortaa. Waxaa lagugula talinayaa inaad qaboojisid firfircoonaanta, si ay khadadka u jaanqaadaan si toos ah geeska, SNAP waa mid firfircoon ama la tirtiro ficil-koodka F3.
Kadibna fariinta sida aan ugu daneyneyno wax-qabadka wax-qabadka; kiiskan waxaan dooran doonaa 200. Halkaasna waxaan haynaa, fudud, aan lahayn dhibaatooyin badan laakiin leh fursado ka yar sida Microstation.
Si aad u bedesho midabka qoraalka ama hindhisyada, waxaa lagu sameeyaa adigoo bedelaya layers ee lagu sameeyay nidaamkan; CVL_RETUTM iyo CVL_RET_TX. Ma aha in ay wasakh ah model, waa in la sameeyaa qaabka.
3. Dib u noqoshada isku-duwidda juquraafi
Tani, waxaan dooran karnaa ikhtiyaarka labaad, amarka RETGPS waxaanan ka jawaabeynaa waxa ay na weydiiso (Meel u dhexeeya dhinacyada cabbirrada ilbiriqsiyada)
Si aad u bedesho cabbirka qoraalka, waxaa lagu sameeyaa: CivilCAD> Text> Qeexida dhererka qoraalka.
Cosillas fudud, taas Civil3D Waa inaan sameeyaa wax badan oo aan soo laaban.
Post Previous«Previous XPERIA mini X10, kulankiisii ​​koowaad ee Android
Post Next Geographica bilowdo sanadka koorsooyinka GIS cusubNext »
5 Jawaab "UTM Iskuduwaha Shabakadda Isticmaalka Madaniga"
CivilCAD ma aha isku mid ah Civil3D.
Waxa aan ka qabay CivilCAD, waxaa laga yaabaa in aan lagu sameyn karin Civil3D.
JAIME ANDRADE isagu wuxuu leeyahay:
Iska cafi xad-dhaafka aan jeclaan lahaa haddii aad i caawiso. Waxaan haystaa Auto Cad 2014 iyo Cilmiga 3d, marka amarrada aad ka tustid kaarka rayidka ee ku lifaaqan Auto Cad ma is waafaqaan. Maxaan sameeyaa? Waad ku mahadsan tahay horay.
Anigu garan maayo sida loo dhigay koobin in ay curiyaan Roobka ee wadataa juqraafi ... kaliya i jirsado si fiican u la UTM isuduwaha ... markii aan dooran Roobka GPS, waxa abuuraa xirneeyn, laakiin ka fog sawirka, kaas oo muujinaya ururuka sida UTM isuduwaha, sida uu aaga u dhigma taas oo ay dhacdo in this waa HUSO 18 koonfurta (Chile), -75 suusho dhexe. Anigu garan maayo haddii aan u baahdo set dhimaya kale. Waxaan kaaga mahadnaqi lahayn in aan caawin kara, waxaan qabaa codsi aad u faa'iido badan.
Waad ku mahadsantahay horay. Salaan
Waa hagaag, CivilCAD way ku xaddidan tahay, maxaa yeelay wax kasta oo ay soo saaraan ma aha mid firfircoon oo aan loo maareeyn karo qaab ahaan.
Waxa aan sameeyay waxa ay abuurayaan baqshiinka xadhigga ah, oo leh asal ahaan ka soo jeedda isgoysyada, iyo amarka qaanuunku ku duubo; Sidaas darteed haddii aan daabaco xajmiga uma maleynayo in aan mar kale dib u saxo oo ay isbedelaan isku mar.
Waxaa sidoo kale jira nidaam joogto ah oo loogu talagalay AutoCAD, oo sameeya wax la mid ah iyada oo aan loo adeegsanin macaamiishii "CivilCAD"
ataulfo isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan ufajiyaa cabbirka shabakada? ... Waxaan u sameeyaa diyaarado noocyo kala duwan ah si aan u badalo baaxada shabaqa. sababtoo ah waa inaan mid waliba u habeeyo
ku mahadsantahay caawimadaada !!!